July 4, 2021 N88LeaveaComment on हात्तीवन रिसोर्टमा नयाँ प्लान वनाउँदै प्रचण्ड, केही दिनभित्रै राजनीतिमा नयाँ तरंग
काठमाडाैं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड परिवारसहित स्थित हात्तिवन रिसोर्ट पुगेका छन् । काठमाण्डौंको दक्षिणकाली नजिकै रहेको यो रिसोर्टमा प्रचण्ड पुग्नुलाई अर्थपुर्ण रुपमा हेरीएको छ। प्रायः राजनीतिक खिचातानी हुँदा प्रचण्ड आराम तथा आवश्यक रणनीति बनाउन राजधानी छोडेर आसपासका होटल तथा रिसोर्टमा जाने गरेका छन् । सत्ता संघर्षको लामो लुछाचुँडीपछि प्रचण्ड […]
विप्लवका प्रवक्ताका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई तनाव
July 4, 2021 July 4, 2021 N88LeaveaComment on विप्लवका प्रवक्ताका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई तनाव
काठमाडाैं । पार्टी भित्रै तनाव खेपीरहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि चेपुवामा पारेको छ । नेकपाले आफ्ना नेता–कार्यकर्ता रिहा र मुद्दा फिर्ताको काम टुंग्याउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई १० दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । आइतबार बिहान नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा र सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलाले बालुवाटारमा […]
July 4, 2021 N88LeaveaComment on माधव नेपालले भाउ नदिएपछि ओलीले भिम रावललाई वोलाए वालुवाटार, के के भयाे कुराकानी ?
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भेट्न अस्विकार गरेपछि उपाध्यक्ष भीम रावल प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गर्न बालुवाटार पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले वोलाकै कारण उनी बालुवाटार पुगेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार माधव पक्षका भीम आचार्य, घनश्याम भुषाल लगायतका नेताले रावलसँग वार्ता गर्न बालुवाटारलाई सुझाव दिएका थिए […]
July 4, 2021 N88LeaveaComment on कहिले चल्छन् लामो दूरीका सवारी साधन ?
काठमाडाैं । कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि काठमाडौं उपत्यकामा लागू गरिएको निषेधाज्ञा एक साता थप गरिएको छ भने सबै सार्वजनिक सवारी साधन चल्ने भएका छन्। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले २२ असारदेखि लागू हुने गरी एक साता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेका हुन्। निषेधाज्ञा थपिए पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्र सबै सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिइने भएको […]
July 4, 2021 N88LeaveaComment on काठमाडौंमा थपियो निषेधाज्ञा, ट्याम्पो चल्ने, जोर-बिजोर हट्यो
काठमाडाैं । कोभिड-१९ जोखिम कम नभएको भन्दै काठमाडौं उपत्यकामा एक साता निषेधाज्ञा थपिएको छ। अब ट्याम्पो लगायतका साना सवारी साधन पनि चल्ने भएका छन् भने जोर-बिजोर प्रणाली हटाइएको छ। आइतबार बसेको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले २२ असारबाट लागू हुने गरी ३१ असारसम्म निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको छ। कोभिड-१९ को जोखिम कम […]
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई हटाएर जातीय विभेदको मुद्दामा कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
July 4, 2021 N88LeaveaComment on शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई हटाएर जातीय विभेदको मुद्दामा कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई पदबाट हटाएर जातीय विभेद सम्बन्धी मुद्दामा कारबाही अघि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ। तनहुँकी रूपा सुनारले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध निवेदन दर्ता गराएकी हुन्। उनले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको निवेदनमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ‘पदीय ओहदा र सरकारी पद तथा स्रोत समेतको दुरुपयोग गरी प्रहरी […]
अस्ति जिम्मा दिनुस् पार्टी मिलाउँछु भनेका बामदेवले बाेली फेरे, भन्छन्, ‘दोस्रो तहका नेताकाे प्रयास काम छैन’
July 4, 2021 N88LeaveaComment on अस्ति जिम्मा दिनुस् पार्टी मिलाउँछु भनेका बामदेवले बाेली फेरे, भन्छन्, ‘दोस्रो तहका नेताकाे प्रयास काम छैन’
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको रिस साम्य नहुँदासम्म दोस्रो तहका नेताको प्रयास सफल नहुने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष गौतमले ओली र नेपाल एकाआपसमा रिसाएकाले दुवैको रिस शान्त नभएसम्म कुनैपनि नेताद्धारा गरिएको एकताको प्रयास सफलहुन नसक्ने बताए । नेताहरु उनीहरुको […]
July 4, 2021 N88LeaveaComment on प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : के अदालतले ‘फलानो’लाई नियुक्ती गर भन्न मिल्छ ?
काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले कुनै अमुक व्यक्तिको बहुमत भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनेर अदालतले अभ्यास गर्न मिल्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ । आफूसहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सभामुखका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई अदालतले बहुमत छ नियुक्त गर […]
July 4, 2021 N88LeaveaComment on पृथ्बी सुब्बा गुरुङ भन्छन् ‘एमाले ओलीको मात्र पार्टी होइन, नेपाललाई अध्यक्ष दिनुपर्छ’
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का नेता तथा गण्डकी प्रदेशका निर्वतमान मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले एमाले अहिले नभएर धेरै अगाडि नै फुटेको बताएका छन् । उनले भने,‘नेकपा हुँदै यो फुटिसकेको थियो नि, प्रचण्ड र माधव नेपालजी एकातिर भाको हो । त्यतिखेर पनि हामीले पार्टी बचाउन प्रयत्न गरेको हो । तर, चाहीँ भएन । अहिले चाहीँ अब यो झण्डझण्डै […]
काठमाडौं । महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरु धमाधम सभापति शेरबहादुर देउवालाई तारो हान्न अघि सरेका छन् । सभापति देउवाबाट पार्टीको नेतृत्व लिने उदेश्यले अरु नेताहरु रणनीति बनाउन कम्मर कसेर लागिपरेको देखिन्छ । आउँदो भदौमा हुने १४ औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरी ती नेताहरु आफूलाई सक्रिय देखाउने कसरतमा जुटेका छन् । यसमा देउवा विरोधी […]